शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा लिन सकिने, – Sandesh Press
June 1, 2021 414
काठमाडौं विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्नातक वाभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत व्याजदरमा रु २५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने बताएका हुन् ।त्यस्तै, सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वयमा काम र रोजगारीको सिर्जना गरिने उनको भनाई । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनसंरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिने उनले बताएका छन् ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
काठमाडौं : कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले को’रो ना भा’इरस निकै बलियो रहेको बताएका छन्। उनले आफू सं’क्रमित भएपछि भोग्नु परेको कठिनाइ र कोरोनामुक्त भएकोबारे मंगलबार फेसबुक मार्फत् जानकारी गराएका हुन् । उनले आफ्नो अनुभव रोचक शैलीमा लेखेका छन्। वैशाख ६ गते मदनकृष्ण सहित उनको परिवार सबै जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
को’रो ना सं’क्रमण भएको केही दिनमै स्वास्थ्यमा स’मस्या आएपछि उनलाई मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । ‘म पहिलो पटक ८ दिन, फेरि दोस्रोपल्ट १४ दिन मेडिसिटी हस्पिटलमा बसेर घर आएको पनि अब त एक हप्ता कटिसक्यो,’ उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्। उनले आफूलाई माया, शुभेक्षा र आशिर्वाद दिने तथा स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने सबैमा कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्।
सोही आशिर्वाद आफूलाई लागेको श्रेष्ठले बताए। कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले छिटो भ्याक्सिन बटुलेर जनतालाई भ्याक्सिन दिएर जनताको ज्यान बचाउन तिर लाग्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा सरकारले को’रो नालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर, सबै तिरबाट जति सकिन्छ-छिटो भ्याक्सिन दिएर जनताको ज्यान बचाउन तिर लाग्न सम्झाउन चाहेको उनले उल्लेख गरेका थिए। ‘जनता नै भएन भने कसलाई शासन गर्ने? होइन त?’ उनले लेखेका छन्।
उनले लेखेका छन्- मलाई माया, शुभेक्षा र आशिर्बाद बर्षाउँदै,मेरो स्वास्थ्य प्रति चिन्ता ब्यक्त गर्नुहुने, सम्पूर्ण मेरा प्यारा प्यारा दर्शक श्रोता, नर्श, डक्टर अनि पृथ्वी भरिका सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजु भाईहरुमा, मेरो हृदयदेखि कृतज्ञता ब्यक्त गर्दछु। याहांहरुको आशिर्बाद लाग्यो मलाई। याहांहरुबाट प्राप्त अमृतमय मायाको बलले को’रो ना रुपी बि’षलाई मज्जाले पचाईयो ।
को’रो नाले मलाई प’छार्न त नराम्रै संगै पछार्यो। पछार्यो मात्र हैन अझ लछार्यो र हस्पिटलमा लगेर मलाई बेस्कन बजार्यो्, ओर्कायो, फर्कायो, थर्काउनु थर्कायो बेला बेलामा तर्सायो पनि। बलियो चाहिँ निक्कै बलियो रहेछ बजिया ..। तर सबैको माया, शुभेक्षा, प्रार्थना, र आशिर्बादको बलले गर्दा मलाई त्यसले जित्न भने सकेन । पछि को’रो ना आफै लुत्रक्क परेर, लाजले नि’हुरिएर, मेरो खुट्टा ढोगेर नमस्कार गर्दै कान समातेर १० पल्ट उठ् बस गरेर ह्वाँ… ह्वाँ … रुंदै मसंग क्षमा मागेर लुसुक्क भाग्यो… … ।
अब शरिरमा अलि अलि शिथीलता बाकि छ । त्यो पनि अलि अलि गर्दै कमकम हुँदैछ। म पहिलो पटक ८ दिन, फेरि दोश्रो पल्ट १४ दिन मेडिसिटी हस्पिटलमा बसेर घर आएको पनि अब त एक हप्ता कटिसक्यो. डक्टरहरुले मलाई तपाईको शरिर अब एन्टि बडी बनीसकेको छ। अब तपाईको शरिरमा अरु कसैबाट पनि को’रो ना भा’ईरस सर्दैन र तपाईँबाट पनि अरुलाई सर्दैन ।
एक प्रकारले भाय्कसिन लिईसकेको सरह नै भैसकेको छ भनेका छन। तर म मेरो PCR रिपोर्ट नेगे’टिभ आयो … भनेर सबैलाई सुनाउने ईच्छाले केहि नलेखी चुपचाप कुरीरहेको थिएँ। तर हिजो फेरि PCR test गराउँदा रिपोर्टले घरमा सबैको नेगेटिभ देखियो ।
मेरोमा अझै अलि पोजेटिभ बाँकि रहेको देखाएको छ। डक्टरहरुको भनाई अनुसार मेरो शरिरमा भएका को’रो नाको भा’ईरसहरु सबै म’रिसकेका छन ।
अब खालि ती मरेका भाईरसका लाशहरु मात्र बाकी छन। त्यो बाँकि हुन्जेल पनि मेशिनले पोजेटीभ नै देखाउँछ। त्यस्ले केहि फरक पर्दैन ,केहि दिन पछि त्यो पनि आफै जान्छ भनेकाछन । जे होस बाँचियो बा … ! को’रो नाले यो मदनकृष्ण श्रेष्ठ भन्ने मान्छे लाई पा’र्केसन छ, प्रोष्टेट, प्रेशर, मुटुको स’मस्या छ, अनि अर्को कन्स्टीपेशनको पनि स’मस्या छ र यस्लाई त मज्जाले चपाउन सकिन्छ भनेर मलाई झम्टिन आएको होला शायद|
यहाँहरु जस्तो मलाई औधि माया गर्नु हुने लाखौँ लाख शुभेक्षकहरुपनि मेरै साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो मोरा कोरोनालाई के थाहा । यो कुरा मैले हजुरहरुलाई जानकारि दिनका लागि मात्र लेखेकोहुं । मनमा अझै पनि पूरा खुशी लागेको भने छैन । देशमा अझै पनि को’रो ना पि’डीतहरु धेरै बाकि नै छन कतिपय अझ थपिंदै पनि छन । यस अबस्थामा देशको सबै भन्दा ठूलो समस्या भन्नु यहि कुलंगार को’रो ना नै हुन ।
सरकारले पनि यस्लाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएर, सबै तिरबाट जति सकिन्छ छिटो भ्याक्सिन बटुलेर जनतालाई भ्याक्सिन दिएर जनताको ज्यान बचाउन तिर लाग्न सम्झाउन चाहन्छु । जनता नै भएन भने कस्लाई शासन गर्ने ? हैन त ?? सबैको जय होस ।सबैको कल्याण होस। को’रो नाबाट संसार चाँडै मुक्त होस । Respect U all Love u all. धन्यबाद मदनकृष्ण श्रेष्ठ
Prevघर भाडामा ५०% छुट गर्न सरकारको आदेश !